Ogaden News Agency (ONA) – Itoobiya oo Kumanaan Ciidan Ah Dhoobtay Xuduuda Sudan & Xiisad Halkaas Laga Dareemayo
Itoobiya oo Kumanaan Ciidan Ah Dhoobtay Xuduuda Sudan & Xiisad Halkaas Laga Dareemayo
Posted by Dulmane	/ February 20, 2017
Wararka naga soo gaadhaya xuduuda Itoobiya iyo wadanka koonfurta Sudan ayaa sheegaya in ciidamada wayaanaha oo kumanaan ah ladhoobay deegaanada kuxeeran xuduuda ee Gobolka Gambella.
Ciidamadan faraha badan ayaa lasheegay in looga gol leeyahay in ay wax kaqabtaan kumanaan kamid ah Jabhada kadagaalanta Gobolka Gambella GPLM oo maalin kasta kasoo gudba xuduuda labada wadan waa Itoobiya iyo Koonfurta Sudan e.
Jabhada GPLM oo bahwadaag la ah isbahaysiga PAFD ayaa lasheegayaa in ay bilihii ugu dambeeyay waday olole balaadhan oo ay kuxoojinayso awoodeeda ciidan waxayna jabhadu ciidanka wayaanaha lagashay dhowr dagaal oo waawayn.
Kooxda TPLF ayaa dowlada koonfurta Sudan ku eedaysay in ay wadankeeda u ogolaatay in Jabhada GPLF ay saldhigyo kuyeelato isla markaana ay ciidamadeeda kutaba barato, hase yeeshee dowlada South Sudan ayaa gaashaanka udaruurtay eedaynta ay xukuumada wayaanuhu usoo jeedisay.
Dhinaca kale taliska wayaanaha ayaa kamasayray kulan taariikhi ah oo dhex maray madaxwaynayaasha Masar iyo koonfurta Sudan kuwaas oo kawada hadlay xidhiidhka labada wadan.
Hase yeeshee xukuumada gumaysiga Itoobiya ayaa kulanka labada madaxwayne dhexmaray kutilmaantay mid lagu duminayo qaran nimada Itoobiya isla markaana lagu caawinayo jamhadaha kasoo horjeeda xukuumada Itoobiya.
Sikastaba ha ahaatee kooxda TPLF ayaa kujaahwareertay isbadalada siyaasadeed ee geeska Africa kuwaas oo qaabkii ay ula jaan qaadi lahayd ay garan la’dahay.